समाचार - ठूलो एलईडी प्रदर्शन को विशेषताहरु के हो?
१ आउटडोर ठूलो एलईडी डिस्प्ले धेरै एकल एलईडी डिस्प्ले बाट बनेको छ, र पिक्सेल पिच सामान्यतया अपेक्षाकृत ठूलो छ। सामान्यतया प्रयोग विशिष्टताहरु मुख्य रूप P6, P8, P10, P16, आदि छन् सानो पिच एलईडी प्रदर्शन संग तुलना मा, ठूलो अन्तर को लाभ कम लागत हो। ठूलो पिच एलईडी डिस्प्ले को वर्ग प्रति लागत सानो पिच एलईडी डिस्प्ले को तुलना मा धेरै कम छ, जबकि आउटडोर ठूलो स्क्रीन सामान्यतया एक लामो दृश्य दूरी छ, जस्तै 8m, 10m, आदि, बाट ठूलो स्क्रिनमा तस्वीर हेर्न। एक लामो दूरी, त्यहाँ कुनै "अन्न" भावना हुनेछ, र तस्वीर गुणस्तर स्पष्ट छ।
2. व्यापक कभरेज र ठूलो दर्शकहरु। आउटडोर ठूलो एलईडी डिस्प्ले सामान्यतया एक अपेक्षाकृत उच्च ठाउँ मा स्थापित छन्, पर्दा अपेक्षाकृत ठूलो छ, हेर्ने कोण पनि ठूलो छ, सामान्य परिस्थितिहरुमा, तेर्सो दिशा भिडियो को एक 140 डिग्री को कोण बाट देखिएको छ, तस्वीर अझै पनी स्पष्ट देखिने छ, जसले ठूलो एलईडी स्क्रीन प्रदर्शन सामग्री एक फराकिलो दायरा कभर र अधिक दर्शकहरु सम्म पुग्न सक्छ बनाउँछ। यो प्रमुख सुविधा पनि एक कारण हो किन धेरै व्यवसायहरु विज्ञापन सामग्री प्रदर्शन गर्न को लागी आउटडोर ठूलो एलईडी डिस्प्ले छनौट गर्न इच्छुक छन्।
3. स्क्रीन चमक स्वतः समायोजित गर्न सकिन्छ। ठुलो स्क्रिन एलईडी डिस्प्ले बाहिर स्थापित मौसम बाहिर बाट प्रभावित हुनेछ। उदाहरण को लागी, बाहिरी चमक एक घमाइलो दिन र एक बरसात को दिन को बीच फरक छ, र यदि प्रदर्शन को चमक स्वतः समायोजित गर्न सकिदैन, प्रभाव बिभिन्न मौसम परिस्थितिहरु मा फरक हुनेछ, वा धेरै कम हुनेछ। लक्षित दर्शकहरु को दृश्य प्रभाव को प्रभावित गर्न को लागी, आउटडोर ठूलो एलईडी डिस्प्ले एक स्वचालित चमक समायोजन प्रकार्य हुनेछ, कि, बाहिरी मौसम को स्थिति को अनुसार, डिस्प्ले स्क्रिन को चमक स्वचालित रूप मा सबै भन्दा राम्रो प्रदर्शन प्राप्त गर्न को लागी समायोजित गरीन्छ। असर।
4, कायम राख्न को लागी सजिलो (सामान्यतया त्यहाँ अधिक पोस्ट-रखरखाव छन्, तर यो पनि पूर्व रखरखाव)। एक ठूलो आउटडोर एलईडी डिस्प्ले स्थापना को लागत कम छैन, हजारौं देखि लाखौं सम्म को लागी। तेसैले, सजिलो रखरखाव ठूलो एलईडी प्रदर्शन को लागी अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यो प्रदर्शन को दीर्घकालीन स्थिर संचालन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। सामान्य परिस्थितिहरु मा, बाहिरी ठूलो एलईडी प्रदर्शन पछि बनाए राख्न सकिन्छ, र केहि प्रदर्शन पहिले र पछि राखिएको छ, अवश्य, दुबै अगाडि र पछाडि मर्मत हासिल गर्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी, Huamei Jucai जा श्रृंखला बाहिरी निश्चित एलईडी प्रदर्शन अगाडि र पछाडि मर्मत प्राप्त गर्न सक्छन्।
5, उच्च सुरक्षा स्तर। बाहिरी वातावरण अप्रत्याशित छ, केहि स्थानहरुमा उच्च तापमान र केहि ठाउँहरुमा बरसात का दिनहरु संग। तेसैले, बाहिरी ठूलो एलईडी डिस्प्ले को सुरक्षा स्तर आईपी above५ माथि हुन आवश्यक छ वर्षा को पानी लाई स्क्रीन मा प्रवेश गर्न बाट रोक्न। जब स्थापना, पनि बिजुली संरक्षण, विरोधी स्थैतिक प्रेरण र यति मा ध्यान दिनुहोस्।
छोटो मा, ठूलो आउटडोर एलईडी प्रदर्शन सामान्यतया माथिको विशेषताहरु छन्। निस्सन्देह, विभिन्न एलईडी डिस्प्ले निर्माताहरु द्वारा उत्पादित आउटडोर प्रदर्शनहरु जस्तै ऊर्जा बचत र बिजुली को खपत को रूप मा अन्य बिभिन्न प्रकार्यहरु, हुनेछन्। तर माथिको विशेषताहरु लगभग सबै आउटडोर एलईडी ठूलो स्क्रीन छन्। 5G युग को आगमन संग, हामी एलईडी आउटडोर ठूलो स्क्रीन बिभिन्न ग्राहकहरु को अधिक आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न को लागी अधिक प्रकार्यहरु र सुविधाहरु को विकास हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछौं।